Adeegyada taageerada ee Dahabshiil ee caawinta macaamiisha inta lagu gudajiro aafa-mareenka Covid-19. : Dahabshiil Customer Portal
Adeegyada taageerada ee Dahabshiil ee caawinta macaamiisha inta lagu gudajiro aafa-mareenka Covid-19. Print
Modified on: Thu, 10 Jun, 2021 at 5:44 PM
Cudurka Korona wuxuu siyaabo badan u saameynayaa qof kasta oo adduunka kunool, dad badan iyo qoysaskooduna waa macquul inay ka walaacsan yihiin nabadgelyadooda, dakhligooda iyo shaqadooda. Waxaan rabnaa inaan yareyno walwalka dhaqaale si kasta oo aan kari karno.
Hal dariiq oo aan taas ku sameyneyno waa inaan hubinno in adeeg yadayada xawaaladaha tooska ah ee internetka inuu si buuxda u shaqeynaayo iyo inaan ku taageerno xubnaheena wixii dhibaato ah ee soo foodsaara ama ka welwelsan. Waxaan shaqeyneynaa saacad kasta si aan uga jawaabno su'aalahaaga oo aan u bixinno gargaar inta lagu jiro waqtigan aan la hubin.
Kooxda taageerada macaamiisha ayaa la heli karaa 24/7. Haddii aad u baahan tahay caawimaad ama macluumaad ku saabsan xawaladahaaga ama waxa la sameeyo, fadlan noola soo xidhiidh siyabaha hoosku xusan:
Booqo boggayaga xiriirka http://www.dahabshiil.com/ si aad u qorto su'aalo adoo adeegsanaya foomka bogga.
Naga soo wac lambarka tel: 08081960755 ama nagalsoo xiriir qebta chatka ama emailka support@dahabshiil.com